သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): မောင်ခွေးနှင့် သူ၏ သရဲအခြောက်ခံရခြင်း
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:21
သူကြီးမင်းရယ် ..ဆွေလေးလဲအဲလို ဖြစ်နေတာဒီမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေတာအကောင်း. ဟိုတစ်ရက် ညဘက် ၃ နာရီလောက်လေ ဖုန်းကနေအော်တို ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့ အသံကြီးထွက်လာတာ.
အရင် ၃ နှစ်လောက် ခေါင်းအုန်းဘေးထားအိပ်တော့ ဘာမှ ဖြစ်ဘူး. အဲနေ့ အပြင်ကစားပွဲခုံပေါ်တင်ပြီး အိပ်လိုက်တော့မှလေ..
ခုတော့ဖြစ် သူကြီးမင်းလိုပဲ ကျောချမ်းသလိုလိုကြီး..
Thursday,4April 2013 at 14:40:00 BST
အာ.. တဂျီးရာ ဖတ်လို့ကောင်းနေတုန်း နင့်ကြောင့် မောင်ခွေးဆို ပြီးစရာလား.... အပိုင်းဆက်ရှိတယ် မဟုတ်လား... တို့တိ တို့တိ မလုပ်နဲ့နော်.. :P
Thursday,4April 2013 at 16:40:00 BST
omg :D waiting for next episode :)
တစ်ယောက်တည်းဆို အလိုလိုကို ကြောက်လာတာ. ဘာမှမရှိပဲနဲ့တောင် အရိပ်မြင်သလိုလို.စိတ်က ဖြစ်လာတတ်တာနော်...
Friday,5April 2013 at 07:30:00 BST
သတိလည်းထားအုံးနော်... မယုံမရှိနဲ့ အထူးသဖြင့် သားစိမ်းငါးစိမ်း ၀ယ်တတ်လေ့ရှိတဲ့အိမ်မှာ သူတို့တွေ ပိုပျော်ကြတယ်။ ဟင်းတူးနံ့ဆိုရင် နာနာဘာဝ ၀ိနာဘာဝတွေက ပိုသဘောကျတယ်ဆိုပဲ.. အမျှဝေလည်း နားလည်မယ်မထင်တာမို့ အိမ်အိုကြီးမှာ မြဲနေမှာအသေအချာ အခုလည်း တဂျီးမင်း ကွန်မန့်တွေ ဖတ်နေတာကို ဘေးနားမှာကပ်ထိုင်နေပုံပဲ :P
Friday,5April 2013 at 08:10:00 BST
ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အသံဆိုတော့ ကုသိုလ်တောင် တိုးနေသေးတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့သူများ တရားဓမ္မ လာဖွင့်ပေးမဲ့သူတောင် အဆင်သင့်ပါလား။း)
သူကြီးမင်းက စာရေးတော်တယ်နော်။ ဖတ်တဲ့သူကိုတောင် ပို့စ်ပြီးသွားမှန်းမသိအောင် ရေးတတ်တယ်။း)
အမှန်က ပြီးသွားပြီ မောင်အွတ်ထောင်ရေ။ (စာနှစ်ကြောင်းလောက် ထပ်ရိုက်လိုက်ရတယ်။ ပြီးသွားမှန်းသိအောင်)။း)
နောက်တစ်ခါ အဲဒီလူကြီးထပ်တွေ့မှ နိပစ် အပ်ပီဆွတ်တ် လာမယ်နော်။ အခုတော့ ပို့စ်က ပြီးသွားပြီ။ စာရေးတော်ပုံများ ပြီးသွားတာတောင် ဖတ်တဲ့သူတွေ မသိရအောင်ပါဘဲလား။း))
ဘာမှ မကြောက်နဲ့။ မောင်ခွေးပြောသလိုသာ ပြန်ပြောလိုက်။ မကြောက်ဖူးလို့။ ဒါပေမဲ့ ဒူးတွေတုန် မျက်လုံးတွေမှုန် နှလုံးတွေခုန်ပြီး အသံတွေတော့ တုန်မနေနဲ့ဦးပေါ့။
တီတင့်ပြောမှဘဲ သားစိမ်းငါးစိမ်း၊ ဟင်းတူးနံ့တဲ့။ အဲဒါတွေက အဘိုးအိုသာ ရှိနေရင် နေ့စဉ်လေ။ ဒါဖြင့်ရင်တော့ သရဲပေါင်းစုံ စုပေါင်းလာရောက်ကြမဲ့ပုံဘဲ။ အခုတောင် တီတင့်ပြောသလို အနားမှာ လာထိုင်ပြီး ကွန်မင့်တွေ လာဖတ်နေမလားဘဲ။း)
Friday,5April 2013 at 11:03:00 BST
ဘီလ်တွေပိုတက်တာက ပိုကြောက်စရာ ...
Friday,5April 2013 at 12:22:00 BST
ပြေးပြီ အရိအရွဲတွေနဲ့ လူကြီးကို မြင်နေရလို့။
(မှတ်ချက် ၁။ တကယ်ကြောက်သည့်ဟန်ဖြင့် ရေးလိုက်သည်။ မှတ်ချက် ၂။ အဟုတ်ပဲ ကြောက်တတ်သည်)
Friday,5April 2013 at 15:04:00 BST
သူဂျီးမင်း ခြောက်ခံရတာကို ဖတ်ချင်တာ.. မောင်ခွေးမှာတင် တန့်သွားတော့ ဆန့်တငံ့ငံ့နဲ့။ ပို့စ်ဖတ်ချင်တာနဲ့ သူဂျီမင်း အခြောက်ခံရပါစေလို့ ဆုတောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ။
Saturday,6April 2013 at 09:13:00 BST
Sunday,7April 2013 at 18:50:00 BST
သရဲက တဂျီးကို ကြောက်လို့ တယ့် မခြောက်ဘူး..စိတ်ချ..း)
Tuesday,9April 2013 at 03:04:00 BST
သူကြီးမင်း လည်း သူရဲကြောက်တာပဲလား။ ဒီကတော့ မတွေ့ ဘူး လို့ မကြောက်ပါ။ စာအရေးအသား ကောငိးလို့ ဖတ်နေရင်းပြီးသွားမှာစိုးနေပါတယ်။ အားရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး စာများများရေးပေးပါဦး။
Friday, 12 April 2013 at 18:44:00 BST
မျက်နှာ နာခေါင်း ပါးစပ် အဲဒီပာာရဲ့ အောက်က တုတ်ချောင်း လေးတွေက မေးမွေးတွေလားပာင်။
Friday, 12 April 2013 at 19:10:00 BST
Wednesday, 17 April 2013 at 17:43:00 BST
တဂျီးကြောက်လို့ တရဲက လာမှာ ဟုတ်တော့ပါဝူးး
တဂျီးအမျှဝေတာရသွားလို့လို့ ပြောတာပါ ဟိ
Monday, 22 April 2013 at 10:32:00 BST